बराबरी नभए के एकता भन्ने ? : प्रचण्ड | mulkhabar.com
April 1, 2018 | 1:07 pm 272 Hits
काठमाडौँ, १८ चैत —
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता अन्तिम चरणमा पुगेका बेला अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बढी उत्साहित देखिन्थे । विगतका तीतामीठा अनुभवले पार्टी एकताको वातावरण बनाएको उल्लेख गर्दै उनले सम्मानजनक बराबरी सिद्धान्तका आधारमा एकता हुन लागेको खुलासा गरे । नेताहरूको क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दै आफू र प्रधानमन्त्री ओली सहअध्यक्ष भएर पार्टी चलाउने उनको भनाइ थियो ।
नेकपा एमाले र माओवादीबीच एकता हुनुपर्छ भन्ने सोच शान्ति सम्झौतापछिकै हो । १२ बुँदे समझदारी भएर देश शान्ति प्रक्रियामा गइसकेपछि मैले तत्कालीन माओवादीको केन्द्रीय समितिमा अब एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पास गराएको थिएँ । माओवादी पार्टी विभाजन नहुँदै काभ्रेको फूलबारीमा सम्पन्न बैठकले पार्टी एकतासम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको थियो । एमालेले पनि त्यसबेला पार्टी एकताका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । हामीबीच ४र५ पटक छलफल भयो, दस्तावेज आदानप्रदान पनि भयो । तर ठोस रूपमा अघि बढ्न सकेन । संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भएपछि पनि पार्टी एकतामा जानुपर्छ भनी पटकपटक छलफल भए ।
त्यसपछि पार्टी एकता संयोजन समिति बनाउन असोज १७ गते ६ बुँदे सहमति भयो । त्यसपछि साझा घोषणापत्र र साझा योजना बनाएर गयौं । त्यसले पार्टी एकताको निम्ति जगैदेखि जनता, कार्यकर्तालाई यसरी अन्तरघुलन गर्‍यो कि अरू सामान्य अवस्थामा वर्षौं लगाएर हुन नसक्ने काम २र३ महिनामा भयो । एउटै पार्टीजस्तो हुन पुग्यो । पार्टी एक गराउने प्रस्ताव जनताद्वारा अनुमोदित भयो । हामीले एकता संयोजन समितिको बैठक बसी अन्तरिम प्रतिवेदन र विधान बनाउने बेला भयो भनेर कार्यदल बनायौं । कार्यदलले प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । त्यसपछि पार्टी एकता टुंगोमा पुग्छ ।
देशको वस्तुगत परिस्थितिले नेताको दिमागमा विचार बन्छ । परिस्थितिअनुसार नयाँनयाँ विचार बन्छन् । नयाँनयाँ सोच आउने गर्छन् । यस पटक एमाले र हामीबीच विचारमा एकरूपता हुने देखियो । जस्तो स् शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा एक भएर जानेमा माओवादी र एमालेमा एकरूपता देखियो । रणनीतिक हिसाबले जाने भनेको समाजवादतर्फ हो । अब पुँजीवादी क्रान्तिको बाटो मूलभूत रूपमा पूरा भएको छ, अबको बाटो नयाँ जनवादी क्रान्तिको बाटो होइन ।
अब हामी समाजवादतर्फ जानुपर्छ भन्ने कुराले मिलेर जानु प्रेरित गर्‍यो । तत्काल शान्तिपूर्ण बाटोमा अघि बढी राज्यबाट स्थायित्व र समृद्धितिर देशलाई लैजानुपर्छ भन्ने कार्यनीति पनि एउटै भयो र रणनीति एउटै । माक्र्सवादलाई निर्देशक सिद्धान्त मान्ने कुरा पनि एउटै भएपछि देश र जनताको चाहना पनि मिलेर जाऊन् भन्ने देखियो । जनतासँग अन्तक्र्रिया गर्दा कम्युनिस्ट एउटै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा बुझियो । २०४६ सालमा पञ्चायतविरोधी आन्दोलनमा जनताबाट एकचोटि जबरजस्त एकता हुनुपर्‍यो भन्ने आवाज आयो । त्यसबेला एकता केन्द्र, एमाले बन्यो । जनता र कार्यकर्ताको एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बन्नुपर्‍यो भन्ने आवाज आयो । नेतृत्वले पनि एउटै केन्द्र बनाउने निर्णय गर्‍यो । मेरो पहिलैदेखि ध्यान कहाँ हो भने चुनावअघि भएको हुनाले एकताको कुरा कामयाबी हुन्छ भन्ने लाग्यो । एक्लै चुनाव उठेर एउटै पार्टीको बहुमत आउने अवस्था छैन, बहुमत ल्याउने हो भने मिलेर उठ्नुपर्छ भन्ने स्वतस् बुझिने कुरा थियो । चुनावको मुखैमा एकताको घोषणा गर्ने रणनीतिले उपयुक्त अवसर पायो ।
चुनावले एकताका लागि मल र सिंचाइको काम गर्‍यो । पहिले पार्टी एकताको कुरा गरे पनि भनेजस्तो परिस्थिति बनेको थिएन, अहिले बन्यो । एमाले र माओवादी दुवै ठूलो बनेर पनि हेरियो । ठूलो हुँदा मनोविज्ञान के हुने रहेछ भन्ने पनि थाहा भयो । सानो भएर पनि हेरियो । एमाले पहिलो संविधानसभामा तेस्रो भयो, सानो पार्टी भन्ने भयो । उसले सानोको अनुभव पनि गर्‍यो । अहिले ठूलो भयो, ठूलोको अनुभव पनि गर्‍यो । माओवादी पनि पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा देशकै ठूलो पार्टी भयो, दोस्रो संविधानसभा तेस्रो भयो । सानो र ठूलो पार्टी हुँदाको अनुभव पनि भयो । विभाजनको अनुभव एमाले र माओवादी दुवैले गरे । यी सबै अनुभवबाट गुज्रियौं हामी । एउटा परिपक्व पार्टी बन्नका लागि आवश्यक पर्ने दुस्ख, कष्ट, हन्डर भोगेको हुनाले पनि अब एक भएर जानुपर्छ भन्ने धरातल बन्यो ।
जनताको मनोभावना र भावना के छ भन्ने बुझेर अघि बढ्नुपर्छ । इतिहासको आवश्यकता के हो रु राष्ट्रको आवश्यकता के हो रु राम्रोसँग विश्लेषण गर्दा सजिलै पत्ता लाग्ने कुरा हो । यी दुई कुरा बुझेपछि काम कार्यान्वयन हुन्छ ।
विभिन्न शक्तिका चलखेल, पार्टीभित्र र बाहिरका प्रवृत्तिहरूले धेरै चलखेल गर्छन् र नेतृत्वलाई गाह्रो पर्छ । त्यसकारण ड्याम्मै सही छाप गरौं अनि अघि जाऔं भन्ने कुरा भएको हो । वाम गठबन्धन गरी चुनावी घोषणापत्र एउटै, उम्मेदवार साझा बनाएर पार्टी एकतासम्म अघि बढ्ने अठोटसाथ हामीले असोज १७ गते घोषणा गर्‍यौं । बाहिर हेर्दा अलि सरप्राइजजस्तो देखिएको हो, हामी काम गर्नेलाई भने त्यस्तो होइन । केही समयदेखि लगातार छलफल भइरहेको थियो, गोप्य बैठकहरू चलिरहेका थिए ।
अहिले दुई पार्टीका दुई अध्यक्षले सकारात्मक, नकारात्मक लामो अनुभवको केन्द्रीकरण हो भनेर बुझ्नुपर्छ । यी दुई व्यक्ति मात्र होइनन्, आन्दोलन, इतिहास र जनताले निर्माण गरेका संस्थाजस्ता हुन् । यदि त्यो अथोरिटी हुँदैनथ्यो भने दुइटा नेताले सही गरेर लाखौं मान्छे एकतामा लाग्दैनथे । त्यो अथोरिटी भएको हुनाले नै यो सम्भव भएको हो । नेतृत्वले आफ्नो पद, प्रतिष्ठा, पार्टी समूहको स्वार्थ मात्रै हेर्‍यो भने त्यो नेता होइन । नेताले मुख्यतस् राष्ट्र र जनतको हित हेर्ने, मानव जातिको हित हेर्ने भयो भने त्यो नेताको रूपमा रहन्छ । उसलाई सबैले पत्याउने र इतिहास निर्माण गर्ने कहलिन्छ । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्न नेता हुनु पर्दैन, जसले पनि हेर्न सक्छ ।
अहिले पनि एमाले र माओवादी एकतामा धेरै पर गइसक्यौं, अब पछाडि फर्कने ठाउँ देख्दिनँ । तर फेरि कुनै दुर्घटना नै हुँदैन भन्न सकिँंदैन । राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुराचाहिँ केही हुँदैन । कहिले ठूला कुरा मिल्ने, साना कुरामा हात्ती छिर्‍यो पुच्छर अड्कियो भनेजस्तो पनि हुन सक्छ । त्यो अलग कुरा हो । शंकै गर्नुपर्दैन, पार्टी एकता हुन्छ । एकीकृत पार्टी समस्यारहित हुँदैन । विवादरहित हुँदैन । अहिले पनि एमाले र माओवादीभित्र कम समस्या छैनन् । कांग्रेसभित्र पनि कम समस्या छैनन् । कुनचाहिँ पार्टी छ र समस्यारहित रु भोलि एकीकृत हुने पार्टीमा पनि अलिअलि समस्या हुन्छन् । मैले भनेको छु नि ।
शान्तिपूर्ण र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट हामी जाने बाटोमा एकता छ । कता जाने रु स्थायीत्व र समृद्धिको बाटोबाट समाजवादतर्फ जाने नै हो । यो भावी रणनीतिमा पनि विवाद छैन । एकता हुन चाहिने मुख्य तत्त्व बनिसक्यो । अब एकता त भयो, भयो । विभिन्न प्रवृत्ति, पात्र स्वभावका कारण अलिअलि समस्या भइहाल्छ । नेतृत्वको आँटले गर्दा ठूलो शक्ति सञ्चय पनि हुन्छ, देश विकासका लागि तागत पैदा गर्छ ।
यो प्रश्न संवेदनशील छ । विगतका अनुभव हेर्दा यो झन् अप्ठ्यारो हुने हो कि भनी मान्छेहरू भन्छन् । एउटै म्यानमा दुई तरबार रहलान् त रु एउटै जंगलमा दुई शेर रहलान् त रु भन्ने उखान पनि छ । हामीले असम्भव देखिने कुरालाई सम्भव बनाउनुपर्छ र मानव जातिलाई योगदान दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा स्पष्ट छौं । हामीले विधि र प्रक्रियाद्वारा नेताहरूको क्षमतालाई निकास दिएर जानुपर्छ । लक्ष्य ठूलो राखेपछि कार्यविभाजन मिलाउन सकिन्छ । अझ ठोस रूपमा भन्दा तत्काल महाधिवेशन गर्न सकिँदैन । अहिले एकता भेला या सम्मेलनबाट एकताको घोषणा हुन्छ ।
त्यस्तो हुँदैन । अहिले केपीजी र मबीच जे छलफल भइरहेको छ, एउटा विश्वास र उद्देश्यसाथ राष्ट्रलाई समृद्ध बनाइछाड्ने संकल्पसहित अघि बढेको हुनाले मान्छेले सोचेजस्तो दुई शक्तिकेन्द्र हुँदैन । हामी गुट अन्त्य गर्ने विधि बनाउँछौं । गुटबन्दीले गर्दा दुस्ख पाइयो भन्ने दुवै नेतालाई महसुस भएको छ ।
सरकारको सुरुको कामलाई कसरी हेर्नुभएको छ र?
नेपालमा पहिलो पटक संघीयता कार्यान्वयन भएको छ ।स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार बनेका छन् । यो ठूलो कुरा हो । मुख्यमन्त्री भइसके, गभर्नर ९प्रदेश प्रमुख० भइसके । अझै पनि केही मान्छे संघीयता असफल भइदियोस् भन्ने चाहना राख्छन् । सिंहदरबारको शक्ति तल पुगेको छ । जनता बलिया भए राष्ट्र बलियो हुन्छ । केही समय संरचना बनाउन गाह्रो छ । मुख्य कुरा प्रदेश मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले दुस्ख पाएर भए पनि जनतालाई सेवा दिनु पर्‍यो ।
साभार – प्रचण्डनिवास ललितपुरस्थित खुमलटारमा शुक्रबार कान्तिपुरका गंगा बीसीसँग पार्टी एकताबारे भएको कुराकानी  कान्तिपुर दैनिक